Andriamanitra ao amin’ny fiainan’I Abrahama
Genesisy 12, 8
Rehefa mijery ny fiainan’I Abrahama isika dia mahita ny finamanana akaikin’izy sy Andriamanitra. Nanorina alitara Abrahama dia niantso ny anaran’ny Andriamanitra. Noho izany dia ny hany azontsika lazaina dia hoe: nanorina alitara izy. Tsy mahita isika fa hoe nanorina lapa be izy ohatra. Tamin’ny faran’ny fiainany dia nanamboatra fasana ho an’I Sarah izy. Fa tamin’izay rehetra nalehany dia nanorina alitara izy, ary nifandray foana tamin’Andriamanitra tamin’ny fiainany rehetra. Taorian’ireo aliltara naoriny dia afaka manao drafitry ny fiainany isika.
Niankohoka tamin’I Andriamanitra Abrahama. Izany no tena zavatra tiany sy mameno ny fotoanany. Ohatra: miankohoka amin’Andriamanitra izy rehefa:
niverina avy tany Egypta izy Genesisy 13, 2-4);
Nahita ny halehiben’ny tany Kanana izy Genesisy 13, 14-18);
Nilaza taminy ny Tompo ary nanova ny anarany Abrama ho Abrahama ( Genesisy 17, 3-5);
Nanao fanekena tamin’I Abieleka tao Beri-Sheba izy ( Genesisy 21, 33).
Ny fanorenana alitara dia tsy asa mora. Tsy maintsy mila vato sy feta. Fa ny fanorenana alitara tena sarotra dia ny fiakarany tany amin’ny tendromobohitra Moria. Ity fanorenana alitara ity dia tsy nampaharary ny lamosiny fa ny fony mihitsy. Fantany fa ity alitara ity dia naorina ho an’ny zanany. Teo imason’ny Tompo Abrahama dia nanolotra ny zanany ho fanatitra. Ny zanakondry tsy tongatonga ho azy teo fa ny Tompo no nanomana izany.
Read more: Andriamanitra ao amin’ny fiainan’I Abrahama
Read more: Eo an-tongotry ny Tompo Jesosy
Fa nahoana isika no mila mamita iraka amin’ny ankizy?
Ny apostoly Paoly ao amin’ny Rom 1, 16 dia manambara fa “ny Filazantsara dia herin’Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino”. Ny baiko farany napetraky ny Tompo dia ny hoe:”Mitoria ny filazantsara amin’ny olombelona rehetra” (Marka 16, 15).
1. Ny antony voalohany sady manandanja fa maninona isika no mamita iraka amin’ny ankizy dia tena ilaina, itoeran’ny baikon’ny Tompo mahery indrindra. Ny kristiana dia tsy afaka ny hiala na hiodina io baiko io. Tian’ny Tompo ny ankizy hanantona Azy (marka 10, 14; Mat 18, 14) Ny Fitoriana Filazantsara araka ny Baiboly dia maniraka antsika hitory amin’ny olombelona rehetra ao anatin’izany ny ankizy.
2. Ny ankizy dia manana filàna ara-panahy. Raha tsy manana ny Tompo izy ireo dia maty ara-panahy. Manana olana amin’ny fahotana izy ireo ary mila mandray ary mametraka ny fitokisany tanteraka amin’ny Tompo. Jesosy.
3. Ny ankizy dia afaka mamaly ny Filazantsara amin’ny alalan’ny finoana farany izay tsotra ananany. Ny Pat Verbal, mpanoratra sy mpanofana eo amin’ny asa fanompoana amin’ny ankizy eo anivon’ny International Network of Children’s Ministry, dia manambara fa ny 75-85% ‘ny kristiana amin’izao fotoana izao dia nanolotena ho an’ny Tompo talohan’ny faha 1( taonany.
Read more: Fa nahoana isika no mila mamita iraka amin’ny ankizy?
Fanasana avy amin’ny Apostoly Paoly
Mba hampahery antsika hiaina araka ny toe-panahy araka an’Andrimanitra dia manasa antsika ny Apostoly Paoly (araka ny Efasiana 5) hipetraka amin’ireto toerana itreto.
1. Tempoly (Efesiana 5, 1-7)
Ao amin’ny Tempoly I Paoly no mampatsiahy antsika ny sorona nataon’ny Tompo Jesosy ho antsika. Ny fahotana dia ratsy ary maharikoriko ny Tompo (Isaia 3, 24).
Raha mandeha araka ny fitiavana isika, ny fiainantsika dia ho fanatitra velona ( Romana 12, 1-2; Filipiana 2, 17)., hankasitrahan’ny Tompo. (Jaona 12, 1-8).
2. Saha ( Efesiana 5, 8-14)
Araka izany ny Apostoly Paoly dia nandeha teo amin’ny saha mba hampiseho antsika vokatra ary nampatsiahy antsika fa ny mandeha amin’ny mazava dia mamokatra vokatra ara-panahy.(Galatiana 5, 22-23).
Raha mandeha eo amin’ny mazava isika , dia tsy hiaraka amin’ny maizina mihitsy. (2 Kor 6, 14-18).
Read more: Fanasana avy amin’ny Apostoly Paoly
FITAHIANA AVY AMIN’NY FANKASITRAHANA
1. Ny fankasitrahana dia fampisehoana ny fiainana ara-panahy
Lioka 17, 11-18
Manahoana kosa ny ahy?
2. Ny fankasitrahana dia mitondra voninahitra ho an’Andriamanitra
Asa 3, 7-11
Mampahery ny hafa isika amin’ny alalan’ny fahaizana mankasitraka
Read more: FITAHIANA AVY AMIN’NY FANKASITRAHANA